Faka: Iimpawu zeNkqubo yokuThetha ngeKhowudi engenaKhowudi | Martech Zone
Faka yenzelwe ukuba amaphulo e-mobile asetyenziselwe abathengisi ngaphandle kwesidingo sophuhliso lweapp. Iqonga linezinto ezininzi ezinokufakwa ngokulula, zihlaziywe kwaye zilawulwe. Uluhlu lweempawu zenzelwe abathengisi kunye namaqela emveliso ukwenza ukuba uhambo lomsebenzisi lubenakho, lubangele nanini na, lonyuse ukuzibandakanya, kwaye lilinganise kwaye lihlalutye ukusebenza kweapp. Iiapps zivela kwi-iOS nakwi-Android.
Iimpawu zohlulwe zaziindawo ezisibhozo ezisebenzayo, kubandakanya isikhokelo, ukunxibelelana, ukucokisa, ukuguqula, ukwenza, ukufumana, ukuqonda kunye nokungenisa. Oku kulandelayo yinkcazo yeempawu ezivela kwifayile ye- Faka iSikhokelo seMveliso.
Isikhokelo Ukufakwa kukunceda ukuba ungene ngempumelelo kubasebenzisi abatsha kwaye utyhile abakhoyo kwiimpawu ezongezelelweyo kunye namandla.
Usetyenziso lweNdlela yokuHamba -Lungiselela ixesha lamaxesha osetyenziso lwabasebenzisi bakho. Qinisekisa ukuba bayaliqonda ixabiso losetyenziso ngokubonisa ezona mpawu ziphambili zohlelo lokusebenza besebenzisa i-carousel ebonakala xa umsebenzisi evula usetyenziso okokuqala.
Gqamisa iNdawo yeApp -Ukujolisa ngqo kubasebenzisi kwindawo ethile yosetyenziso ngokuthi "baqaqambise" le ndawo ngesicatshulwa esichazayo. Ilungele ukukhwela ebhodini, okanye ukuqhuba ukusetyenziswa kweempawu ezintsha.
Ingcebiso yesixhobo seFowuni -Nika isixhobo esincomekayo esichaza iqhosha okanye inqaku, ngesicatshulwa esalatha kwinto ethile yolo seto, inqaku okanye ukubiza isenzo.
Cebisa i-App -Kwimeko elungileyo, cebisa kubasebenzisi ukuba basebenzise into ethile yenkqubo kwaye bayise ngqo kwiscreen seapps efanelekileyo, besebenzisa ikhonkco elinzulu.
Communications Ukufaka kufaka iincoko ekujoliswe kuzo nabasebenzisi ngokuthumela umyalezo ngexesha elifanelekileyo, okubangelwa kukusetyenziswa okuthile kweapp, yimbali yomsebenzisi okanye umsebenzi wexesha lokwenyani kunye nokunye, kwaye kunokujoliswa ekwandiseni ukubandakanyeka komsebenzisi ngomyalezo.
Umyalezo ongaphakathi nohlelo -Imiyalezo yangaphakathi nohlelo yazisa umsebenzisi, kwaye unokuhamba kunye nekhonkco okanye i-deeplink, uqhuba isenzo kwangoko. Imiyalezo ibandakanya umfanekiso kunye neqhosha lokubiza isenzo elinokukhokelela umsebenzisi kwiscreen esithile sohlelo lokusebenza.
I-Interstitial -Izinto ezingena ngaphakathi zizinto ezinemifanekiso enesikrini esigcweleyo esebenzayo phakathi kwezikrini, emva kwescreen esinye nangaphambi kokulandelayo.
Umyalezo wevidiyo -Abasebenzisi bayayithanda ividiyo, kwaye imiyalezo yevidiyo yindlela elungileyo yokunxibelelana nomyalezo 'weemvakalelo' okanye onzima odlula inqaku eliqhelekileyo lolwazi.
Isibhengezo -Ngokungafaniyo ne-interstitial, iibhena ziyimifanekiso emincinci ecofwayo enokuthi iboniswe kwiindawo ezahlukeneyo zesikrini. Ngokudibanisa ibhena engezantsi kwi-app yakho, unokunxibelelana nabasebenzisi bakho ngaphandle kokuphazamisa ukusebenzisa kwabo usetyenziso, kuba ibhena ayibathinteli ekusebenziseni usetyenziso.
Cwangcisa yenza ukuba iimveliso zenze utshintsho kwimixholo kwi-app ukuqhuba ukuzibandakanya, ngokuguqula isicatshulwa senkqubo, imifanekiso okanye imixholo.
Guqula isicatshulwa -Une typo okanye ufuna ukuvavanya i-A / B kuvavanyo oluninzi lokubhaliweyo? Ngaba ufuna ukutshintsha izicatshulwa zeapps ukulungiselela umsitho okanye iholide ekhethekileyo? Ngaba ufuna ukutshintsha izicatshulwa nje ukuba umsebenzisi egqibile ukwenza into ethile kwi-app? Phawula isicatshulwa ofuna ukusibuyisela kwiscreen sohlelo lokusebenza, endaweni yaso ngombhalo omtsha kwaye ulungile ukuba uhambe.
Guqula umfanekiso -Tshintsha imifanekiso yemifanekiso ukulungisa imiba yohlelo lokusebenza okanye ubone ukuba yeyiphi imifanekiso eqhuba ukubandakanyeka okungcono. Elula kakhulu ngaphandle kokubhalwa kweekhowudi, nokuba utshintsho lomfanekiso lwenziwa kuphela kwimeko ethile, kubaphulaphuli abathile okanye ixesha.
Guqula umxholo -Tshintsha iapps ukubonelela ngemixholo yamaxesha onyaka, anje ngeeholide okanye ukubuyela kwimiyalezo yesikolo.
Ukuguquka Ukufakwa kwenzelwe ukudala injongo yokuthenga kunye nokuqinisekisa ukuba iphelela kuthengiso lokwenyani. Benza injongo yokuthenga, ngelixa ukusebenzisa ukusetyenziswa kwezikhumbuzi zenqwelo kungathumela abasebenzisi ukuba baqhubeke nokuthenga okushiyiweyo.
Ikhuphoni -Ukwazisa abathengi abanokubakho malunga noko kunikezelwayo kunye nokuba kutheni kufuneka bethenge ngoku, ungabonisa isithembiso esisebenzayo kunye nekhuphoni. Ukucofa kuyo kuthatha abasebenzisi kwiscreen esisebenzayo okanye ukuvula isiphequluli.
Inqwelo yokukhumbuza (ukutyhala) -Ukuba abasebenzisi basenazo izinto kwinqwelo yabo, bafumane ukuba babuye kwaye bagqibezele ukuthenga ngesaziso esenzelwe wena ukuba amakhonkco anzulu kwiscreen senqwelo yeapp.
Umyalezo ongaphakathi nohlelo -Ukufakwa kwemiyalezo yeapp kungasetyenziselwa ukukhumbuza abasebenzisi ngeenqwelo zokuthenga ezilahliweyo ngexesha elizayo xa beqalisa usetyenziso.
Ukuya kwekhasi -Yenza ngokulula iphepha lokufika ngaphakathi kwesicelo sabo, uqinisekise ukuba abathengi bafika kwizaziso ezenzelwe wena, iintengiso, imithombo yeendaba ezentlalo okanye ii-imeyile kumakhasi omntu owenzelwe ukuguqulwa okuphezulu.
I-Interstitial -Izinto ezingena ngaphakathi zizinto ezinemifanekiso enesikrini esigcweleyo esebenzayo phakathi kwezikrini, emva kwescreen esinye nangaphambi kokulandelayo. Bakhokelela abasebenzisi kwiscreen seapps okanye iphepha lewebhu kwaye zihlala zisetyenziselwa ukuhambisa ulwazi olungenaxesha njengothengiso lwanamhlanje, ukunyusa njl.
bandakanya -Ukufaka ekujolise kuko kunye nokuqala kwabo, nokuba kuhamba ngokuntsokotha.
Phinda ubandakanye abasebenzisi abangasebenziyo -Uphinde ubandakanye abasebenzisi abangasebenziyo ngokusebenzisa unikezelo olukhethekileyo lwexesha, imiyalezo ekujoliswe kuyo kunye nokunye. Chaza kwaye uhlukanise abasebenzisi abangasebenziyo kunye nokujolisa kwiminikelo eyahlukeneyo kwicandelo ngalinye.
Wamkelekile aBasebenzisi abaLaleyo -Chaza ukuba ngoobani abasebenzisi bakho bamandla, ngokusekwe kwiipatheni zabo zokusebenzisa nangaphezulu, kwaye ubonise uxabiso ngezaphulelo, izaphulelo, ukufikelela okanye ukunyuselwa.
Uhlaziyo lwenguqulo -Yila umyalezo ongaphakathi nohlelo owazisa abasebenzisi ngobukho bohlelo lokusebenza olutsha, oludibanisa nalo.
Zuza -Ukufakwa kokufunyanwa kukhulisa isiseko somsebenzisi wosetyenziso ngokulinganiswa okungcono kweapps okanye ukukhuthazwa kosetyenziso. Eli nqanaba lifuna ukuba umnini weapp azame ixesha elifanelekileyo, ukuze abasebenzisi bafumane ukufakwa okungazukuthintela ukusetyenziswa kwabo kweapp.
Isampula yokuFumana ukuFakwa -Sebenzisa eli fakelo ukukhuthaza abasebenzisi ukuba babelane ngeapp okanye umxholo wayo kwimidiya yoluntu.
Ukunyusa umnqamlezo -Nqamleza ezinye iiapps, ngokuzicebisa kubasebenzisi beapps.
Linganisa iapp -Buza abasebenzisi ukuba bafumane ireyithingi ye-app ngexesha elililo- xa benamava amahle eselfowuni- kwaye ngaphandle kokubaphazamisa. Sicebisa ukuba ukhethe abasebenzisi be-app yakho yamandla, kuba kunokwenzeka ukuba banike inqanaba eliphezulu.
Qonda -Ukufumana iimpendulo ezichanekileyo kwimibuzo malunga nokukhethwa ngumsebenzisi, iimpawu okanye ingxelo yinto ebaluleke kakhulu yokuzibandakanya kwesoftware. Eli candelo libandakanya uphando, kubahlalutyi kunye nokuxhasa ukufakwa.
Isampulu yokuqonda ukufakwa -Nxibelelana nabasebenzisi bakho ukuze ufumane ingxelo yexesha lokwenyani kwiimpawu ezintsha zeapps, ixabiso lokusebenza, izinto ozikhethayo, kunye nasiphi na esinye isihloko, usebenzisa isaveyi yombuzo omnye.
Uphando lwemibuzo emininzi -Uvavanyo olunemibuzo emininzi lunokuboniswa kwiscreen esinye okanye ngesilayidi.
Thumela ngaphandle kuhlalutyo lweGoogle - Olu fakelo lukuvumela ukuba uphawule umsitho ongathanda ukuwulandela kwiscreen, usebenzisa ujongano lwewebhu, kwaye ube nawo kubahlalutyi malunga nalo msitho uthunyelwe ngexesha lokwenyani kwiakhawunti yakho yeGoogle Analytics.
Qamba yenza ukuba iimveliso zenze ukufakwa kwesiko kusetyenziswa nawuphi na umxholo we-HTML, ukubonisa naphi na kwi-app yakho, kunye namandla afanayo okubangela ukufakwa ngaphakathi komxholo wosetyenziso, ujongano lomsebenzisi kunye nokujolisa kubaphulaphuli abathile.
tags: kwi-appUkuthengisa ngaphakathi nohleloImiyalezo engaphakathi nohleloIn-app imiyalezo ephathekayofakaphakathiusetyenziso lweselulaUhlalutyo losetyenziso lweselfowuniii-coupons zesoftwareIngxelo yosetyenziso lweselfowuniUkuqaqambisa usetyenziso lweselfowuniusetyenziso lweselfowuniintengiso yesoftwareUkusebenza kwefowunimobile ukupapasha usetyenzisousetyenziso lweselfowuni lokutyhala imiyalezoIselfowuni siphakamisa ingxeloisoftware yesoftwareukuvavanywa kwesoftwareIngcebiso yesixhobo se mobileIsoftware yokuphucula umyalezoukuhamba kwesoftwareImfono mfono imiyalezo yokwamkelaapps mobileamatikiti eselulaukuhamba phakathi kweselfowuniImiyalezo yevidiyo ephathekayouphando lweeapps ezihambayoiqonga lophando lweeapps ezihambayo
Isixhobo seRank: Ixabiso leFowuni yokuSebenzisa iiFowuni kunye noRhwaphilizo